Wiil Soomaali ah oo ka macaashay 'bacaha dhibka ku haya' deegaanka - BBC News Somali
Wiil Soomaali ah oo ka macaashay 'bacaha dhibka ku haya' deegaanka
Wiil dhalinyaro ah oo ka damqaday saameynta ka dhalata bacaha ay xooluhu cunaan ayaa magaalada Garoowe ku hindisay qaab arrintaasi wax looga qaban karo. Wuxuu la yimid qorshe uu bacaha la isticmaalo uga sameynayo agabka dhismaha loo adeegsado.
Cabdifataax Jaamac, oo hindisay hal abuurkan ayaa BBC da u sheegay sababaha uu u curiyey barnaamijkan, "Waxa fikirkaan igu dhaliyey hadda ka hor mar aan rabay inaan iibsado lo' ayaa waxaa la igu yiri lo'da waagii hore ayey fiicnaan jirtay balse hadda bacaha ay cunaan ayaa dhibaato ku haya, markii la ii sheegay inay xoolo badan u dhinteen cunidda bacaha ayaa waxaan is weydiiyey maxaa laga qaban karaa arrinkan."
Cabdifataax, si uu uga hortago dhibaatada ay bacaha ku hayaan xoolaha ayaa waxaa uu la yimid hal abuur ah inuu bulukeetigii guryaha lagu dhisayey uu ku badelo bacaha, "si aysan xoolo dambe ugu dhimanin baco ay cuneen."
"Dowlada hoose ee magaalada Garoowe ayaa arrinkan aad noogu dhiiragelisay, iyadoo noo balanqaaday inay naga iibsan doonto dhammaan wax soosaarkanaga, haddana injineerro ayaa noo yimid oo raba inay iyagana naga iibsadan bulukeeti u ekahan bacaha laga sameeyey."
Tan markii laga hirgeliyey magaalada Garoowe ayaa waxa soo dhaweeyey dad badan, iyagoo sheegay inay aad u dhiiragelinayaan dhalinyarada keentay fikirkan cusub ee looga hortagi karo dhibaatooyinka bacaha.
"Halkan waxaan u imid inan arko hal abuurka dhalinyaradan, markii ugu horreysay ee aan maqlay arrinkan suuragal way ila noqon weyday balse intii aan halkan joogayna dhiiragelin badan ayey igu kordhisay." ayuu yiri Cabdiqani oo kamid ah dadka daggan agagaarka laga hirgeliyey warshadan.
Meelo badan oo kamid ah dhulka Soomaalida waxaa dhibaato badan ku haya bacaha, iyagoo waxyeeleeya deegaanka iyo xoolaha. Waxaana fikirkaan cusub ee laga hirgeliyey Garoowe uu yarayn karo bacaha.
4 Disembar 2020
Maxaad ka taqaannaa gabdhaha ilaaliya xiddigaha filimada, sida Shahrukh Khan?
Gabadha la baxsatay askerigii ku ilaalinayay xabsiga Kuuriyada Waqooyi